Ndụmọdụ kachasị mma maka njem mgbe ị dị ime | Save A Train
Home > Travel Europe > Ndụmọdụ kachasị mma maka njem mgbe ị dị ime
(Emelitere ikpeazụ On: 29/05/2020)
Pregnantbụ nwanyị bụ otu n'ime oge kachasị dị ụtọ nke ndụ gị. Ọ na-eme, Otú ọ dị, were ụfọdụ mgbochi. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem mgbe ị dị ime. Ibu na iwulite nwatakiri na-egbochi ụdị ụgbọ njem ịnwere ike iji gbaa, ọkachasị mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime n’ụwa. Mmadu aghaghi ife efe na otutu udiri njem ozo mgbe ha di ime n’oge onwa ole, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu. Gbalịa itinye ihe ndị a niile n'ime atụmatụ njem ime gị. Veryzọ kachasị mfe iji rute ebe ị na-aga mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime via ụgbọ okporo. Companieslọ ọrụ ụgbọ oloko na-ejikarị ụmụ nwanyị dị ime eme ihe, na -eme ka ọ bụrụ otu n’ime ụzọ kachasị ewu ewu iji ụgbọ njem mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime.
Train Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel, Karịsịa Mgbe Tna-etegharị mgbe ị dị ime. Isiokwu a na-e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Weebụsaịtị ndị ụgbọ oloko dị ọnụ ala N'ụwa.
Tupu ịmalite iji obere gị banye na njem gị tupu ị malite njem, were oge iji dozie ahụ gị maka njem mgbe ị dị ime. Gbalịa mee ọtụtụ mgbatị ahụ ị nwere ike, nke a hụ na ahụ gị dị n’ụdị kachasị mma kpuchiba ebe nile ị na-eme njem. Inggagharị njem mgbe ị dị ime nwere ike ịnwe ọtụtụ ihe. Mee ịgbatị, na iwusi isi gi na ukwu gi ike. Na-ehi ụra na ngalaba njem na-agbakarị ihe karịa otú ị na-emebu, na ị nwere ike ịchọ ngbanwe nha iji nwee ahụ iru ala mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime.
Paris na London
Berlin na London
Brussels na London
Ga njem mgbe ntinye ime 1: Lelee Dọkịta Gị
Tupu ịmalite ime njem mgbe ị dị ime, lelee akwukwo gi na i n’ezie ka asacharo ya. Gbalia ịkọwa na ị na-eme njem mgbe ị dị ime ụgbọ okporo ígwè ọ bughi site n’ikuku, n'ihi na nke ahụ ga-akacha nwee nnukwu mgbanwe na nsonaazụ ahụ. Ime nwere ike ibute ime na ndị merela ngwụsị nke ọnwa atọ ha nwere ike ọgagọ ịnweta njem mgbe ha dị ime, ya mere ọ kacha mma ka ewepụchaa ya ụzọ zere mmechuihu. Ozugbo ị mechara ihe niile, dee akwụkwọ nke gị ụgbọ okporo ígwè tiketi online.
Amsterdam na Paris
London na Paris
Rotterdam na Paris
Brussels na Paris
Tna-etegharị mgbe ị dị ime NDỤMỌDỤ 2: Jiri nwayọ Mee atụmatụ
Anyị niile maara na ihe omume dị ka agbamakwụkwọ na oriri anaghị adaba n'oge oge gị zuru oke, especially if you are planning on traveling while pregnant. N’ebe enwere ike, Otú ọ dị, gbaa mbọ hụ na njem gị jikọtara akụkụ kacha dị mma nke afọ ime gị. Oge mbụ nke ọnwa na-abụkarị afụ ụfụ, enweghị agụụ na-adị oke egwu, nke bụ akụkọ ọjọọ maka njem mgbe ị dị ime. Oge nke atọ bụ mgbe ị malitere inwe mmetụta dị ka azụ whale, iguzo n’elu oge obula n’eme ka ukwu gi choo iguzo. Tinye nkwonkwo ụkwụ na-asọ asọ, enweghị ụra, na ngagharị nke nwa na-etolite etolite na-etolite na nke a, ị nwere ike inwe njem ahụ anaghị adịkarị mma ma ọ bụrụ na njem mgbe ị dị ime. Oge nke abụọ bụ oge kachasị mma iji mee njem gị. Too buru oke ibu karịa, na ọtụtụ ikpe, ọgbụgba adalatala. Gagharị njem mgbe ị dị ime ga - akacha eme nke ọma ma ọ bụrụ na i wepụtaghị oge niile iji bulie ya elu, ma ọ bụ dinaa!
Milan na Rome
Naples ka Rome
Ga njem mgbe ntinye ime 3: Weta Egwuregwu nke Gị
Inweta ahụ iru ala mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime adịghị mfe. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ntakịrị mgbe emesịrị n'afọ ime. Jide n'aka na ichiri ohiri isi nke kachasị amasị gị maka njem gị. Inwe ohiri isi gi aghaghi ime ka obi sie gi ike karie mgbe i di ime, mana ọ ga-emekwa ka ị mara ihe ọ ga-eme iji nyere gị aka ịda mba. Travelgagharị njem mgbe ị dị ime nwere ike ime ka azụ gị dị, olu, Ọmarịcha akụkụ ọ bụla na-ewute gị. Ka anyị chee ya ihu, ọmarịcha ihe ọ bụla nwere ike ịdị na-akpata nrụgide ebe ị dị ime, yabụ gbaa mbọ oge niile mee ihe dika odi mfe mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime.
Milan ke Venice
Padua na Venice
Bologna na Venice
Rome na Venice
Tna-etegharị mgbe ị dị ime NDỤMỌDỤ 4: Debe Oge Gị
Travelgagharị njem mgbe ị dị ime na-ebute ọtụtụ oge na-atụghị anya ya. Never maghị etu obi ga-adị gị n'ụtụtụ njem gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ahụ gị ga-achọ oge maka oge ị na-eme njem mgbe ị dị ime. Ihe niile na-agwụ ike karị, na otu onye nwere ike na-agba n'oge. Bido tebụl oge tupu njem ị ga-aga, ma hụ na itinyekwu oge ka ọ gafee. Ebumnuche ịmalite nke ahụ egbu oge dika ije ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ agaghị eme ka ị nwee ọsọ ọsọ mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime. Chọpụta, ịnọdụ ala ichere ụgbọ oloko gị nwere ike ịbụ ihe mgbu, mana ọ ka mma karịa iji ọsọ, mgbe ọ dị ime, ijide ya.
Salzburg na Vienna
Munich na Vienna
Graz na Vienna
Ga njem mgbe ntinye ime 5: Edaberela na nri nri
Alldị ihe niile nwere ike ịpụ afọ gị mgbe ị dị ime. Ghara ikwu na enwere ndepụta dịka ogologo oge ogwe aka gị nke ihe ị na-ekwesịghị ka ị rie. Ing webata nri nke gị dịka akụkụ nke atụmatụ njem gị ga - eleghara ọtụtụ n'ime nsogbu ndị ahụ mgbe ị na - eme njem mgbe ị dị ime. Mgbe ichotara nri nke gi, ị maara nke ọma ihe dị na ya, na kpọmkwem ihe ga-atụ anya. Gbalia itinye ha na igbe nju oyi ma obu ngwugwu ndi ozo echekwara ka o ju ma obu kpoo oku mgbe ị na-eme nwa.
Nuremberg na Prague
Munich na Prague
Berlin na Prague
Vienna na Prague
Tna-etegharị mgbe ị dị ime NDỤMỌDỤ 6: Ugboro ato Lelee Ọgwụ Gị
Obi mmetụta ahụ mgbe ị matara na ịhapụla ọgwụ dị mkpa bụ ihe enweghị onye ọ bụla n'ime anyị chọrọ inweta, ọkachasị mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime. Mgbe ị na-atụ anya, inwere ike ị onụ ọgwụ dị iche iche kwa ụbọchị. Ndị a nwere ike ghara ịbata na mmalite nke uche gị mgbe ị na-eburu njem maka mgbe ị dị ime. Gbalịsie ike na ọ bụghị naanị na-egosi na ị nwere ọgwụ zuru ezu ị ga-eji ga njem mgbe ị dị ime mana meekwa ka onye ọzọ lelee gị..
Frankfurt na-aga Berlin
Leipzig na Berlin
Hamburg na Berlin
Ingga njem Mgbe ị dị ime NDỤMỌDỤ 7: Ewelikwala ibu gị!
A na-eleghara nke a anya mgbe ị na-eche banyere njem mgbe ị dị ime. Oge ụfọdụ, anyị na - ebu igbe ozu ma ọ bụ obere akpa naanị ka ọ wee rụchaa ya. Mkpuchi ibu dị arọ, ya mere ibuli ya elu mgbe ị dị ime bụ mba-mba! Mee ka onye ozo nye gi aka ma oburu na igha, ma obughi kpupue onye nche iji nyere gi aka mgbe ị na-eme njem di ime.
Tna-etegharị mgbe ị dị ime NDỤMỌDỤ 8: Emela njem naanị
Ọ bụrụgodị na ị na-eme atụmatụ iwere njem naanị gị, Gbalịa ka gị na onye ọrụ ibe ma ọ bụ enyi gị nwee ike ịga otu ebe. Gagharị mgbe ị dị ime naanị na-ekpughere gị nnukwu ihe egwu. Maghị ma ihe nwere ike imehie, yabụ ịchọrọ ihu ọma n’ebe ahụ iji nyere gị aka ịpụ. Mgbe ị na-ekpebi atụmatụ njem gị, Gbalịa itinye ma ọ dịkarịa ala onye ọzọ ị tụkwasịrị obi iso gị mee njem.
Ingga njem Mgbe ị dị ime NDỤMỌDỤ 9: Weta Egwu
Isi ihe dị n’ịkwadebe mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime bụ iji belata nchekasị. Nchegbu nwere ike ibute ụdị anụ ahụ niile na-adịghị mma na mmetụta na-adịghị mma n'ahụ gị. Jide n'aka na ị ga-eweta ụfọdụ egwu gị n'ụgbọ oloko gị. Pịgharịa n’isi gị, ma nọdụ ala ma zuru ike ka ị na-erute ebe ị na-aga. Cheta iku ume.
NDỤMỌDỤ 10: Detuo tiketi gị n’ihu
Gbalịsie ike na ọ bụghị naanị ịme akwụkwọ tiketi gị n'ịntanetị maka ịga njem mgbe ị dị ime, mana ị na-enwetakwa tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ na Save A Train. Ijide n'aka na ị nwere udo nke uche gbasara inweta tiketi kacha mma, mee ya tupu oge ọ bụla, nweta tiketi ụgbọ elu ziri ezi dị mkpa iji nwee ahụmịhe dị mma mgbe ị na-eme njem mgbe ị dị ime.
Pregnantbụ nwanyị dị ime bụ ọmarịcha ahụmi ma mgbe ụfọdụ ọfụma. na Save A Train ọ ga-amasị anyị inyere gị aka ịnụ ụtọ njem gị, buru ụzọ hazie, ma zere ụdị nsogbu ọ bụla. Tna-ama jijiji mgbe ị dị ime ụgbọ oloko bụ ọmarịcha ahụmihe, nke ahụ agaghị agbanwe n'ihi na ị na-achọ nwa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Ndụmọdụ Maka njem mgbe ị dị ime” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-pregnant%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
europetravel ime Train Travel travelingwhilepregnant TravelPregnant traveltips
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel UK, Travel Europe